Qoosaa: Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta’antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi’ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan! -
* Isaan kunneen gar-malee waan wal-jaalataniif ija isaanii afoo wal-dhabuu kan hin feene yoo ta’an, akka carraa ta’ee guyyoota hedduuf osoo ijaan wal hin argin addaan waan turaniif inni dhiiraa sun jaalallee isaa yaadee bilbiluufii eegale!
~Dhiira = “Heloo lubbuu too, akkam naaf jirta?”
~Dubara = “Heloo sabboonaa koo, naga jira ati akkam naaf jirta?”
~Dhiira = “Takkattii too, waan yaada keetii malee naga kooti!!
~Dubara = “Siifuu koo, anillee akkasumatti si yaadaa jiraa bar!”
~Dhiira = “Tole si malee too, har’a wal haa garruu kaa!”
~Dubara = “Dhiifama ruhii koo, guyyaa biraa yoo ta’e malee har’a natti hin tolu!”
~Dhiira = “Hayye daawwitii too, rakkoo hin qabu. Garuu har’a eessa deemuu hedda?”
~Dubara = “Bareedaa koo, warri adaadaa tootii har’a cidha wahii waan qabaniif harmee too wajjiin achi deema jedheeti. Ati hoo har’a maaf na barbaaddeeyyu?”
~Dhiira = “Bareeddu too, obboleessi koo kan Ameerikaa jiru sun miilana qarshii guddoo waan naa ergeef wantoota ati jaalattu kanneen akka Mobaayilaa, Qamisii, Wandaboo, Kootii, Kophee fi k.k.f siif bita jedheeti!”
~Dubara = “Lubbuu koo, amma hatantamaan haa dhufuu ree?”
~Dhiira = “Harmee too wajjiin cidha deemaa jira jechaa hin jirtuu amma?”
~Dubara = “Abdii koo, siin qoosee bar!!!”
~Dhiira = “Kijibduu too, anillee siin qoosee bar!!!”_KKKKKKKKKKK….!!!
‪#‎HUBADHAA‬:-Kana yoon jedhu intalti takka gocha kana raawwattee turte jechuu kooti malee, dubartoonni hundi gocha akkanaa raawwataa jiru jechuu koo akka hin taane cimsaa, cimsaa, cimsaa naaf hubadhaaa!
Tags aadaa afaan Jaalala Qoosaa
Previous Ethiopian Oromo Rebel Group Founder Returns to Domestic Politics
Next Hamma hin jirree bookkisa dullacha
fileembar alamuu gamteessaa
baay’ee nama barsiisa.